KALA DUWANAANSHAHA GALA: SHARAXAAD IYO SAWIR, MAST, ROYAL IYO NOOCYO KALE, MEESHA AY KU KORAAN IYO WAXA KALOORIGA - BEERTA
Mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan adduunka - Apple Gala
Apple Tree Gala - Noocyo cusub oo Shiineys ah, oo laga helay gudbinta Jiilaal dahab ah iyo Carruurta Orange Red.
Inta badan waxa uu caan ku yahay dhadhanka macaan, iska-caabbinta hoos u dhac iyo wax ka badan nolosha shafka dheer iyo tayada ganacsiga sare ee midhaha. Geed geedeedka dhalidda sare, u nugul yahay in ka badan.
Gala - Apple Tree Bisaylkiisa dayrtaqaan-gaadhka la kala saari karo bartamihii Sebtembar, iyo macaamiilka bisha November. Kala duwan waa mid aan qabyo ahayn, leedahay caabbinta dhaxan dhexdhexaad ah.
Kordhin ciidda qallalan oo aan u dulqaadan xaddi xad dhaaf ah qoyaan.
Waa maxay nooca noocan ah?
Tilmaanta iyo astaamaha kala duwan ee tufaaxa Gala - kala duwanaanta xilliga dayrta, oo leh heer sare, si joogto ah iyo dhadhan fiican ee midhaha. Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee geedaha tufaaxa adduunka.
Wax ka baro kala duwanaanta dayrta ee kala duwan ee tufaaxa Aelita, taas oo ay kala duwan tahay aan qabyo ahayn.
Qeexida kala duwan Gala
Tixgeli qaababka dibadda ee geedka tufaaxa iyo miraha.
Krone at geedka tufaaxa ovalaha ballaaran, aan qaro lahayn. Geedka laftiisa dhexdhexaad ahoo leh heer sare oo daciif ah iyo halkii laamaha jilicsanfiirinta.
Miraha waa jaale cad oo leh caarad casaan, taas oo inta badan daboosho dhammaan tufaaxa, waxoogaa yar oo ka mid ah qaab muuqda oo aan la arki karin.
Waxay yartahay qiyaas yar, qiyaastii 160 ilaa 170 garaam. Miisaanka shan-dhibcood, fasalkan waxaa la siiyaa dhibco ah 4.6 dhibcood. Qaybta kalooriga ee tufaaxa Gala wax yar ayuu ka sarreeyaa qiimaha nafaqada ee noocyo farabadan oo kale ah waxayna la mid tahay 53.7 kcal.
Tufaaxu waa mid aad u casiir leh, macaan, caro, jajab, wax pear-jecel inay dhadhamaan.
Markii ugu horeysay ee kala duwanaanshaha gala ayaa la nadiifiyey 1957 ee New Zealand, laakiin ugu dhakhsaha badan ayaa ku faafay Brazil, Canada, USA.
Kala duwan ayaa si xoog leh u soo jiitay dareenka beeralayda, laakiin dadka dhexdoodana waxa ay ahayd mid aan la daaweynin sababtoo ah muuqaalkii hore ee jilicsanaa iyo cabbirka yar.
Isla mar ahaantaana, horumarin dheeraad ah oo geedo tufaax ah ayaa bilaabmay, taas oo ka dhalatay taas oo keentay in badan oo dhagaxyo la helay, kuwaas oo soo iibsaday muuqaal dheeraad ah oo muuqaal ah iyo tayada wax soo saarka wanaagsan.
Noocyada soo socda ayaa ah kuwa ugu caansan: Gala Mast, Gala Shniga, Gala Delishes, Gala Royal, Gala Brookfield, Gala Jazz, Gala Delfoga, Gala Mondial iyo wixii la mid ah
Gala waa kala duwan tahay caabbinta dhaxan dhexdhexaad ahsidaas darteed meelaha ay jiraan Miraha daran, waxaa fiican in aan ku beeran. Halista sare ee khatarta ah in geedku aanu ku noolaan karin jiilaalka.
Haddaba xaggee bay kala duwan yihiin gala?
Bilowgii, geedka tufaaxa waxaa lagu dhaliyey New Zealand, halkaas oo heerkulka jiilaalkuna uusan marnaba diidmin.
Buuraleyda kulaylaha iyo kuwa hoose-dhexe ayaa halkan ku leh.
Mustaqbalka, noocyada kala duwan ayaa la hagaajiyay, kororka jiilaalka oo sii kordhaya iyo adkaysiga guud ee geedka.
Goobaha ugu haboon ee Gala kala duwan xilligan waa steppes iyo keynta-steppe. Laakiin tani waa aragti keliya, xaqiiqda ah, geedka tufaaxu wuxuu dareemayaa wanaag wanaagsan oo ka jira gobol kasta oo aan lahayn jiilaal aad u adag iyo iska-horimaad daran.
Yield - Tani waa arrin ay sabab u tahay Dhirta Apple ayaa caan ku ah wax soosaarka. Dhirta qoyan waxay keenaan sannad walba 55 - 70 dhalid ah.
Geed geed oo kala gedisan bartamihii Sebtembar, mudada ah ee lagu naqshadeeyo miraha kala duwan ee mutacalayaasha kala duwan ee Gala kala duwan kala duwan yihiin dhawr bilood gudahood.
Akhri ku saabsan macmacaanka macaan Antonovka, oo sidoo kale ka duwan dhalidda sare.
Markaad ku beerto tufaax waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso waxyaabo badan, ma aha oo kaliya cimilada iyo xaaladda carrada.
Waxaa jira qadar aad u yar oo ah geedo midho leh iskood u sameysma, laakiin xitaa waxay midho badan u dhali karaan inta lagu jiro iskutallaab-pollination.
Dhammaan noocyada kala duwan ee leysku rinqaado midba midka kale si wanaagsan, waxay ku xiran tahay sifooyinka shakhsiga ah ee geedka.
Sidaa darteed, waxay ubaahantahay daryeel ku saabsan si ay u koraan xiga geedaha tufaaxa wanaagsan ee riman.
Geedka tufaaxa Gala waa in uu si fiican u nadiifiyaa: Idared, Rennet Simirenko, Melrose, Boqortooyada.
Apple Tree Gala Delishes: Renet Simirenko, Goldspur, Boqortooyada, Idared, Taliyaha Sare, Champion.
Gala waxaa lagu beeray geedo badan, laakiin kuwani waa kuwa isbahaysiga ugu waxsoosaarka. Si kastaba ha ahaatee aad u liidata pollinated by kala duwan Golden Delicious.
Geedka soo saar geedaha tufaaxa ayaa ugu fiican dayrta, ugu yaraan hal bil ka hor dhaxan.
Cimilada qoyan ee qoyan iyo qoyaanka xiliga roobku waxay saameyn wanaagsan ku yeeshaan koritaanka geedaha yar yar.
Plus si toos ah ka hor xilliga qaboobaha geedaha u galaan isugeyngeeddi-socodka bayoolajiga ayaa hoos u dhacaya iyo alwaax wuxuu u dulqaadanayaa qashin iyo kaabis.
Ceelka beeritaanka waa in si taxadar leh loo diyaariyaa, waa inay ahaataa qoto dheer laga bilaabo 70 cm ilaa mitiriyo mitir dhexdhexaad.
Lakabka sare ee bacriminta laga bilaabo godka waa in lagu qaso dhowr baaldiyo Bacriminta dabiiciga ahqadar yar lime iyo qoryo qoryo.
Isku dar waxaa loo baahan yahay raashinka iyo korniinka. Ceelkii laftiisa wuxuu u baahan yahay in la diyaariyo illaa bil ka hor beerashada si uu carrada u fadhiisto.
Haddii dhirta kale koray oo la bacrimiyey ka hor geedka tufaaxa, waa in la bacrimiyo wax yar ka yar. Waxaa jira khatar sare oo ah in geedku uu si dhakhso ah u korayo sababtoo ah xad-dhaaf ah nafaqooyinka, taas oo saameyn xun ku yeelan doonta dalagga.
Abuuritaanka taajka waa lagama maarmaanka ma ahan oo keliya dhinaca daaweynta suuxinta, tufaaxa ka dib markii manjooyin sax ah, waxay si fiican u dhali doonaan miraha miraha.
Manjada ugu horeysa waxaa lagu fuliyaa sanadka labaad ee nolosha. geedka, guga, ka hor inta aan la gooyay.
Dusha sare waa in la gooyaa daruurisi kor loogu qaado koritaanka caleemaha lateral.
Kobaca ayaa la gooyaa sadex meelood meel kasta sanadkiiba.Sababtan awgeed, caleemaha dhinaca kale ayaa ka muuqda, cufnaanta geedka iyo xaddiga korodhka dalagga.
Apple Tree Gala aad u u nugul in la koro beerahasidaas darteed iyada xakamaynta khasabka ah ee ku saabsan tirada iyo tayada miraha.
Waxbarashada kadib waxay ubaahan tahay in laga saaro tufaax dhexe oo laga soocayo xidhmo kasta, iyo sidoo kale dhammaan miraha qaab aan joogto ahayn.
Haddii aad aragto in geedka tufaaxa ah uu weli ka badan yahay, ka tago xirmo kasta 1-3 uurjiif.
Tani waa muhiim sababtoo ah Tiro badan oo tufaax ah ayaa si xun u saameyn kara tayadooda. Ka sokow ka dib goosashada oo aad u badan, geedka ayaa nasanaya oo helaya xoogaa sanadka soo socda.
Fiiri fiidiyowga ku saabsan waxa la sameeyo haddii geedka tufaaxu uu ku badan yahay miro.
Geedo biyo yaryar waa inay ahaadaan toddobaadkii hal mar, ee geedo baaluq ah, qadarka waraabinta ayaa la yareynayaa loona qaaday sidii loo baahdo. Apple Tree Gala Waxay ka xun yihiin kuwa kale inay ka gudbaan qulqulkasidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad ka taxadarto arrintan.
Naaquska nafaqooyinka, iyo sidoo kale xad-dhaafkooda, aad u xun oo saameeya horumarinta miraha.
Si loo xaqiijiyo goosashada wanaagsan iyo tayada, sannadkiiba Dhirta Apple waxay u baahan yihiin in la bacrimiyo bacriminta organic iyo macdanta.
Ka hor ciidda qabow hareeraha geedkii, dabooli geedka. Daboolka dhirta yaryar waa mid cad xalka jilicsanhaddii geedka uu ka weyn yahay 5 sano - lime.
Kala duwanaanshaha gala aad u adkaysi u ah qolofta iyo xagta oo budada ahLaakiin waxaa jira cuduro badan iyo cayayaanka oo dhali kara geedka iyo dalagga.
Cayayaanka ugu caansan iyo siyaabaha looga hortagi karo:
Apple Blossomama si fudud weevil, waxay cunaan ubax geedka tufaaxa, taas oo baabi'inaysa miraha suuragalka ah.
Waxaa lagama maarmaan ah in laga takhaluso ka hor bilawga kulaylka, sidaas darteed haweenku ma laha waqti ay ukunisid.
Habka ugu fudud ayaa ah xakamee cayayaankakuwaas oo horay u soo saaray dhulka.
Si hubaal looga takhaluso dulin, geed ayaa awoodi kara geeddi-socodka calypso, waxaa loo isticmaali karaa wakhti kasta, marka laga reebo waxay ku badbaadi kartaa shinni iyo cayayaanka kale ee geedaha.
Codeyn la'aan Codayn - cayayaanku ugu khatarsan.
Gawaarida waxay ka cunaan tufaax gudaha, iyaga oo gebi ahaanba burburinaya. Ka soo horjeedka aboor ku qaylinaya si fiican u isticmaal suunka xayiraadda.
Qeybta hoose waa tan jirridda waxaa lagu duuduubay cillad, oo aad u sarreeya oo gudaha loo geliyey roodhida tufaaxa - cawska. Cayayaanka Cayayaanka burburay.
Sidoo kale habka dadku waa fiican - ku buufinta geedo qoyan.
Qalabka waraaqaha cuno burooyinkeeda iyo caleemaha, ka dibna waa la duubayaa. Sawirkaan waxaad arki doontaa caleemaha saameeya xaashida.
Sidaa awgeed magaca cayayaanku. Diidmada buug-yaraha ayaa sidoo kale wax ku ool ah duufaanka xayawaanka, decoction ee yaanyada iyo daroogada "Lyufoks"
Si loo xakameeyo cayayaanka waxtarka leh, waxa ugu muhiimsan waa Waqtiga si aad u ogaato.
Haddii aad raacdo dhammaan xeerarka beeritaanka, daryeelidda iyo ilaalinta geed, Geedka tufaaxa ee Gala wuxuu ku farxi doonaa oo muujinayaa sifooyinka noocyada kala duwan ee caan u ah.